RHCE प्रमाणित बनने को लागि सबै भन्दा प्रभावी तरीका
ITIL सेवा रणनीति (एसएस)
ITIL सेवा सञ्चालन (SO)
ITIL मध्यवर्ती सीएसआई
ITIL मध्यवर्ती पीपीओ
ITIL मध्यवर्ती भाग
ITIL मध्यवर्ती आरसीवी
ITIL मध्यवर्ती SOA
ITIL विशेषज्ञ (MALC)
प्रमाणित नेटवर्क डिफेंडर (CND)
ECSA v10 (ईसी-काउंसिल प्रमाणित सुरक्षा विश्लेषक)
एलपीटी (इजाजतपत्र प्रवेश परीक्षक)
कम्प्युटर हैकिंग फॉरेन्सिक अन्वेषक (CHFI)
EC-Council प्रमाणित सुरक्षा विशेषज्ञ (ईसीएसएस)
ईसी-काउंसिल प्रमाणित प्रमाणित ह्यान्डलर (ईसीआईएच)
EC-Council प्रमाणित एन्क्रिप्शन विशेषज्ञ (ईसीईएस)
ईसी-काउन्सिलको प्रमाणित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी | सीआईएसओ)
प्रमाणित सिक्योरिटी कम्प्यूटर प्रयोगकर्ता (CSCU)
CAST 612 उन्नत मोबाइल फोरेन्सिक्स र सुरक्षा
CAST 613 हैकिंग र हार्डिंग कर्पोरेट वेब अनुप्रयोग / वेब साइट
CAST 614 उन्नत नेटवर्क रक्षा
CAST 616 सुरक्षित विन्डोज इन्फ्रास्ट्रक्चर
ब्लूकोट आईपीएम अनिवार्य छ
ब्लूक्याट सुरक्षा र उन्नत कन्फिगरेसन
ArcSight Logger प्रशासन र सञ्चालन
HP ArcSight ESM 6.9 सुरक्षा प्रशासक
चेक पोइन्ट प्रमाणित सुरक्षा प्रशासक R80
चेक पोइन्ट प्रमाणित सुरक्षा विशेषज्ञ (CCSE)
साइबरमो प्रमाणित नेटवर्क र सुरक्षा विशेषज्ञ
साइबरमो प्रमाणित नेटवर्क र सुरक्षा व्यवसाय (CCNSP)
ट्रेन्ड माइक्रो डीप डिस्कवरी
ट्रेन्ड माइक्रो डीप सुरक्षा स्क्यान
ट्रेन्ड माइक्रो अफिस स्क्यान
ट्रिटोन एपी-डाटा प्रशासक कोर्स
ट्रिटोन एपी वेब
मास्टर प्रशिक्षक र सुविधा (MTF)
उन्नत प्रशिक्षण प्रविधिहरूमा प्रमाणीकरण (CATT)
प्रमाणित मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवसाय (सीपीटीपी)
प्रमाणित प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धा विकासक (सीपीडीसी)
एचआर एनालिटिक्समा प्रमाणित प्रोफेशनल (CHAMP)
प्रमाणित संगठनात्मक विकास विश्लेषक (CODA)
प्रमाणीकरण भर्ती विश्लेषक (सीआरए)
प्रमाणित ओडी हस्तक्षेप प्रोफेसर (CODIP)
प्रमाणित बैलेंस स्कोर कार्ड व्यावसायिक (सीबीएससीपी)
प्रमाणित कार्यकारी र जीवन कोच (CELC)
प्रमाणित मानव व्यापार साझेदार (CHRBP)
प्रमाणित निर्देशक डिजाइनर (सीआईडी)
प्रमाणित शिक्षा र विकास प्रबन्धक (CLDM)
एङ्गुलर जे एस एक्सएनमक्स
परीक्षण गर्न परिचय
HP सफ्टवेयर स्वचालन परीक्षण
Ranorex v8.x (उन्नत को लागि आधारभूत)
HP डेटा रक्षक
AWS प्रशिक्षण मा आर्किटेक्टिंग
AWS टेक्निकल अनिवार्य प्रशिक्षण
सिस्को नेक्सस 9000 कन्फिगर गर्दै ACI मोड v2.0 मा स्विच गर्दछ
NX-OS मोड (C9000KNX) मा सिस्को नेक्सस9कन्फिगर गर्दै
CCNA रुटिङ र V3.0 स्विच गर्दै
CCNP रुटिङ र स्विचन
जे एस जवाफ दिनुहोस्
प्रोग्रामरहरूको लागि आर परिचय
नोड जे एस
पहिले epochs संग सेलेनियम
पोस्टअभिनव प्रौद्योगिकी समाधान
RHCE प्रमाणित कसरी गर्ने?
RHCE प्रमाणित प्राप्त गर्न प्रक्रिया
RHCE श्रोता: तपाईं यो कहिले जानु पर्छ?
के तपाईं आरएचईसी प्रमाणित हुनु पछि के गर्न सक्नुहुनेछ?
एक RHCE (रेड Hat प्रमाणित ईन्जिनियरिङ्) प्रमाणीकरण दुनिया भर मा सबै भन्दा चाहेको र अनुरोधित सिस्टम प्रमाणपत्र हो। एक RHCE अनिवार्य रूप देखि एक रेड Hat प्रमाणित प्रणाली प्रशासक (RHCSA) छ जो विशिष्ट क्षमता र कमजोरी छ जो स्पष्ट रूप देखि एक वरिष्ठ प्रणाली को कार्यान्वयन को आवश्यकता हो। एक आरएचईसीले प्रमाणित गरेको प्रमाणित प्राविधिक रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स प्रणालीहरूको निरीक्षण गर्ने काम गर्दछ जुन मूलतः लिनक्स फैलावट प्रणाली हो रे Hat Hat द्वारा। यो प्रणाली अहिले नि: शुल्क र खुला स्रोत हो। यो यस तरिकामा आश्चर्यजनक छैन कि RHCE प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नु आईटी विशेषज्ञहरूले पूरा गर्ने एक मोडको रुपमा हेरेको देखिन्छ। पेशाका दृष्टिकोणहरू ग्यारेन्टी र उच्च पूरा हुँदैछन्। यस तथ्यको बावजूद, RHCE को पुष्टि को साधन को लागि आरएचएसएसए को गारंटी दिइन्छ पहिले। RHCE प्रमाणित कसरी भयो?
RHCE प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नु अघि, एक RHCSA पुष्टि हुनु पर्छ। प्रशिक्षण निर्धारित तपाईंको वर्तमान योग्यता सेट को लागी उत्तरदायी छ। ती विन्डोज एडमिन्सहरू जुन कम्तिमा लिनक्स अनुभव छ परीक्षाको लागि तयार गर्न Red Hat प्रणाली प्रशासन I र II (RH124 र RH134) पाठ्यक्रमहरू र रेड ह्याटमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन III (RH254) पाठ्यक्रमको लागि जान सकिन्छ। यदि यो अति धेरै समस्या छैन भने तलका बिन्दुहरूलाई अनुमति दिनुहोस्:
विन्डोज प्रणाली कार्यकारीहरू जसले लिन्क्स सबैभन्दा सानो सामना गर्दछ:
रेड Hat प्रणाली प्रशासन I (RH124)
रेड Hat प्रणाली प्रशासन II (RH134)
रेड हट प्रणाली एडमिनिस्ट्रेशन III (RH254)
लिनक्स वा युनिक्स निरीक्षकहरू जुन 1 सँग3अनुभवको वर्षको वरिपरि छन्:
RHCSA रैपिड ट्रक कोर्स (RH199)
तपाईं कुनै पनि प्रशिक्षण मोडमा बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको लागि मान्य छ - क्लासरूम, वेबमा, वा तपाईंको वेबपेजमा। त्यहाँ धेरै आधारहरू छन् जुन RHCSA प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू र अन्य सफल स्तरहरू प्रदान गर्छन्।
ती आरएचएसएएसले विशेषज्ञहरूलाई सम्बोधन गरे जुन एक वरिष्ठ-स्तर क्षमता हासिल गर्न चाहन सक्छ जुन अन्तको लक्ष्यमा ध्यान दिईरहेछ उनीहरूको आवाज RHCE प्रमाणीकरणमा जानु पर्छ। तपाईले पनि RHCE लाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाइँ एक सफल वरिष्ठ प्रणाली कार्यकारी हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। यसको अतिरिक्त, बन्द मौका मा तपाईंले RHCE रैपिड ट्रयाक कोर्स वा प्रणाली प्रशासक I, II, र III लाई समाप्त गरेको व्यक्ति समाप्त गर्नुभयो।
त्यसैले RHCE प्रमाणिकरण समाप्त गर्न, ले लिनक्स 3.5 को लागी एकले 300 घण्टा RHCE परीक्षा (EX7) पास गर्नुपर्दछ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। यो एक चार दिनको काम संरचना हो जसले शिक्षकलाई रेड ह्याट एडमिनिस्ट्रेशन I, II र III पाठ्यक्रमहरूको प्रयोगशालाको प्रत्येक एक माध्यमबाट काम गर्ने ब्रेक पाउँछ, सँगै राप ट्रयाक कोर्सको साथ।
रेड ह्याटले व्यक्त गरेको रूपमा, पहिलो महत्त्वको विषयको रूपमा कुनै पनि RHCE ले यो RHCSA ले पक्कै प्रमाणित गरेको कुरा लिन्छ। यसबाहेक, तिनीहरूले टुक्रा रनटाइम मापदण्डहरू सेट गर्न क्षमता पाउनेछन्; स्थिर पाठ्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्, बन्डल विभाजित गर्नुहोस्, र ठेगाना व्याख्या व्यवस्थित गर्नुहोस्; सिर्जना र वितरणले प्रणाली उपयोगको खाता दिन्छ। डिजाइन प्रणाली लगिङ, रिमोट लगिङ सहित; एक (iSCSI) सुरूवात प्रबन्ध गर्नुहोस्; शेल स्क्रिप्ट प्रयोग गर्न प्रणाली समर्थन उपक्रमहरू मेकेनेज गर्न र प्रशासनिकताहरू जस्ता HTTP / HTTPS, FTP, NFS, SMB र यसका लागि प्रणाली प्रदान गर्न डिजाइन गर्नुहोस्।
यस लाइनको साथमा, RHCSA को पुष्टि गर्नु अघि RHCSA को पुष्टि गर्नु भन्दा पहिले RHCSA प्रमाणीकरण को रूप मा पुष्टि र आरएचसीएसए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरु लाई क्षमता को सेट को लागी समन्वय गरिएको छ जुन सबै Red Hat आइटमहरु को काम गर्न को लागी गरिन्छ। RHCE लाई पुष्टि गरियो प्राप्त गर्न को लागि शानदार अवसर क्षमता परिणाम र उद्योग अभिस्वीकृति सुझाव गर्दछ। यस तथ्यको बावजूद, तपाइँले प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न प्रक्रिया माथि रेड ह्याट द्वारा स्पष्ट गरे पछि लिनु पर्छ। तपाईंले RHCE प्रमाणीकरणको लागि परीक्षा लिनको लागि अन्तिम लक्ष्य दिमागमा राख्नुको लागि केहि परीक्षा पास गर्नुपर्छ।
RHCSA परीक्षा युक्तिहरू - कसरी RHCSA परीक्षा पास गर्ने?
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) को हो Red Hat प्रमाणीकरण
प्रकाशित12 अक्टोबर 2018
अभिनव टेक्नोलोजी सॉल्युशन्स कम्पनी हो जसले आईटी र व्यावसायिक कुञ्जीहरूमा व्यक्तिगत, कर्पोरेट र कलेजहरूको प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। प्रशिक्षण प्रशिक्षणको अलावा भारतको सबै कर्पोरेट केन्द्रहरूमा कर्पोरेट प्रशिक्षण आवश्यकताहरूको लागि प्रशिक्षण कोठाहरू छन्। थप पढ्नुहोस्
बी 100 ए, दक्षिण सिटी 1, हस्ताक्षर टॉवर नजिकै, गुड़गाँव, HR, भारत - 122001
प्रतिलिपि अधिकार © 2017 - सबै अधिकार सुरक्षित - अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान | गोपनीयता नीति.